Kuhle SPC zaphansi Ngesandla Esiqinile kuncike Click Lock Lock PVC Vinyl Flooring Manufacturer and Factory | U-Iverson
Lawa mabhodi e-vinyl amapulangwe angenawo amanzi ayi-100% asebenzisa ubuchwepheshe obuphambili bomswakama obunobufakazi bomswakama, obulungele kakhulu izicelo zokuhweba zokuhlala nezikhanyayo. Impahla eyisiqalo yamatshe ayi-4.5 mm awugqinsi (SPC) inikezela ngekhwalithi enhle kakhulu, okwenza ifulethi lakho lihlale liqinile futhi kube lula ukulinakekela. Phansi kudlule isitifiketi seFloorScore, esingaletha umoya onempilo nohlanzekile, futhi silethe ikhwalithi yomoya omuhle ekhaya lakho nasemndenini wakho. Isendlalelo se-cushion esenziwe ngaphambilini sinciphisa umsindo, sinciphisa ukushaqeka, futhi sithuthukise imfudumalo nenduduzo ngaphansi kwezinyawo zakho. Isendlalelo esiqinile somgogodla nongqimba oluqinile lokugqoka olumelana nokwenza i-vinyl flooring wood flooring ingasetshenziswa iminyaka eminingi. I-vinyl flooring flooring ingavalwa, i-100% ayinamanzi futhi kulula ukuyihlanza. I-Iverson vinyl floor flooring: izinkuni okusanhlamvu flooring ngokusebenzisa ukuthungwa kwayo kwemvelo Nemibala iletha umuzwa onethezeke kakhudlwana endlini yakho. Yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ezinobungani bemvelo futhi ziphephile. Ukumelana nokuklwebheka nokungangeni manzi: Isendlalelo sokugqoka futhi ulwelwesi olunamathele ku-IXPE luthuthukisa kakhulu ukumelana nomhuzuko nokuklwebheka phansi. Ukuhlanza nsuku zonke nokuvuza kwamanzi okuvamile ngeke kulimaze phansi. Idizayini yokuxhuma exhunywe ngaphambili: Isakhiwo esihlanganayo senza ukufakwa kwakho phansi kube lula futhi kuzinze, ngenkathi kunciphisa umsindo, kunciphisa ukudlidliza nokwenza ngcono induduzo. Kulula ukuyifaka: Ingafakwa egumbini lokuphumula, ekhishini, ekamelweni lokulala, emnyango, ephaseji noma kwezinye izindawo ezinabantu abaningi. Ingasetshenziswa ngokuqhubekayo iminyaka eminingi, ngewaranti yeminyaka engu-15 elula yokuhweba kanye newaranti yokuhlala impilo yonke.
Langaphambilini I-WPC flooring engaphakathi lendlu yangasese yangasese - iversion
Olandelayo: I-SPC Flooring Ikhwalithi ephezulu yeVinyl Plank